Konke Okufuneka Ukwazi Ngaphambi Ukuthenga I-LGD-2226 Powder | AASraw
Konke Okufuneka Ukwazi Ngaphambi Ukuthenga I-LGD-2226 Powder
/Blog/LGD-2226/Konke Okufuneka Ukwazi Ngaphambi Ukuthenga I-LGD-2226 Powder
ezaposwa ngomhla 05 / 11 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo LGD-2226.
Yonke into malunga ne-RAD140 (Testolone) powder
I-2.LGD-2226 i-powder Review
3. I-LGD-2226 powder isebenza njani?
Ukusetyenziswa kwe powder 4.LGD-2226
5.Izibonelelo zokusebenzisa i-LGD-2226 powder
6.Iziphumo ze-LGD-2226 powder
I-7.LGD-2226 powder I-Recipe-Iimveliso kunye neefom
8.LGD-2226 powder- Ukuhlolwa kwamatshini
9.Uphando olutsha kwi-LGD-2226 powder
I-10.LGD-2226 i-powder-pre-clinical stages
11. Thenga i-LGD-2226 powder online
12.Question Ukuthenga i-LGD-2226 powder
I-13. Enye i-powder ye-Sarms (ukuthengiswa okutshisayo):
SARMS powder okanye i-Androgen Receptor Modulators i-classroom ye-androgens esitsha esisebenza ngokufanayo njenge-anabolic steroids kunye neprohormones kuncinci iziphumo eziqhelekileyo ze-steroids ezizisa. Abagijimi abaninzi kunye nabazimba bomzimba baye batshintshela kwiSARMS njengoko kukhuselekileyo kwaye kusebenza ngakumbi ekwakheni imisipha kunye nokwandisa amandla ngaphandle kokubeka impilo engozini.
Enye i-SARM eyenza amaza namhlanje I-LGD-2226 powder i-SARM kwisigaba sayo sokuqala esikliniki esaphuhliswayo njengonyango wokuxhatshazwa kwemisipha kunye ne-osteoporosis. Ulwazi lusekuncitshisiwe, kodwa yile nto esiyaziyo malunga ne-LGD-2226 powder njengomzuzu:
Ividiyo ye-LGD-2226 powder
IRaw LGD-2226 powder ezisisiseko Abalinganiswa:
igama: I-LGD-2226 powder
I-molecular Formula: C14H9F9N2O
Isisindo somzimba: 392.219g
I-LGD-2226 powder yi-SARM engabonakaliyo ngomlomo eyenziwe ngomlomo, iqinisa amathambo kunye nokuphucula umsebenzi wezesondo kwindoda zamadoda ngaphandle kokuphazamisa ubungakanani beprotate. Ngexesha le-4 yinyanga yokwelapha esebenzisa le ngxube kumakhondo angamadoda avuthiweyo , abaphandi bafumene ukuba i-LGD-2226 powder yathintela ukulahleka kwethambo kunye nokugcinwa kwenyama yamathambo ngeendlela ezimbini - ukwandisa izinga lokuloba amathambo nokunciphisa izinga lokubuyisela amathambo.
Ezinye ezininzi iziyobisi kunye nokhetho lwezokwelapha zijolise enye yeendlela. Olu pho nonongo luqinisekisile iziphumo zokufundwa kweengxelo zangaphambili ukuba le nxalenye ikwandisa ubunzima be-muscle kunye ne-libido.
Akukho phando lophando kule SARM ethile, kodwa kunikwe iingeniso ezibonwe ngolo hlobo, zinokuhlulwa njengesigaba esihle se-anabolic SARM kunye nenzuzo eyongezelelweyo yokuphucula umsebenzi wesini. Uphando olongezelelweyo lufunekayo kule ngqungquthela kwimimiselo engabantu kunye nabantu.
Igama lemveliso I-LGD-2226 powder
ICompe Formula C14H9F9N2O
IMisa eyiyo 392.0571
Isisindo somzimba 392.2246
Uhlalutyo loLuntu C, 42.87; H, 2.31; F, 43.59; N, 7.14; O, 4.08
Ukungcola > 98% (okanye ubhekisele kwiSatifikethi soHlololo)
Umzimba Isisombululo kwi-DMSO, kungekhona emanzini
Isitoreji seStock Solution 0 - 4 C ngexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki), okanye -20 C ixesha elide (iinyanga).
Ulungelelaniso lweNkqubo yeNkqubo 293490
CatKoo Cat # 522569
Ngokusekelwe kwingcaciso eqokelelweyo, i-LGD-2226 powder iseseSigaba seNzululwazi Iilingo zenzululwazi ngoko ke inendlela ende yokuhamba phambi kokuba ifikeleleke kwaye xa kufika ixesha elo, kuya kuba yinto enyango.
Yazi ngakumbi malunga ne-LGD-2226 powder kweli nqaku.
3.Iphi i-LGD-2226 powder isebenza?
I-LGD-2226 powder yayo enegunya kunye ne-SARM esebenzayo ngomlomo esebenza njengamanye. Ezi iithagethi ze-SARM zeseli zesisundu kunye nethambo. Inceda ekusebenzeni izenzo ze-androgenic kwiimeko apho amanqanaba e testosterone emzimbeni akwanele ukwenza njalo. Umzimba uvelisa i-testosterone ngendlela elawulwayo kwaye kwezinye iimeko, i-hormone ayinakho okwenzela isenzo so-androgeniki esifanelekileyo ukuze kugcinwe umzi womzimba ukuze usebenze.
Ukongezelela oku, kwiimeko ezibi kakhulu, i-testosterone eyenziwa emzimbeni inokuba yinto encinci, iholele ekudakaleni kwemisipha. I-LGD-2226 powder ingasetyenziswa njengesisombululo kuzo zonke le micimbi. Isenzo salo sokhetho siya kubangela imisebenzi ye-androgenic kwiiseli ezinamahlunu xa kuqinisekiswa ukuba umveliso oqhelekileyo we-testosterone uhlala ungasebenzi. Kubafundi bomzimba, oku kunokukunceda ukuphucula umgangatho wokunyamekela, okukhokelela kwiziphumo ezingcono.
I-LGD-2226 powder isilwanyana esilawulwa ngomlomo kwaye kufuneka sithathwe ngamanzi okanye ijusi. Izilingo zeklinikhi zisalungelelanisa kakuhle i-dosage, ngakumbi kubantu abanokufuna ukusebenzisa i-SARM njengenxalenye yokukhwabanisa, ukusika okanye ukuphindaphinda. Nangona kunjalo, ayiyi kuba yude kude kube yilapho i-dosage information iphuma.
I-LGD-2226 powder yipilisi yophando eyenzelwe unyango lwe-osteoporosis kunye nokuxhatshazwa kwemisipha. Isilwanyana sisisombululo se-androgen se-receptor kwaye siklanyelwe ukulungiselela enye indlela yokusebenzisa i-steroids yabakhi bomzimba.
I-LGD-2226 powder iyinkunkuma elawulwa ngomlomo kwaye kufuneka ithathwe ngokusetyenziswa kwamanzi okanye ijusi. Izilingo zonyango zihlala zilungelelanisa i-dosage, ingakumbi kubantu abanokufuna ukusebenzisa i-SARM njengenxalenye yokuqhawula, ukusika, okanye ukuphindaphinda. Nangona kunjalo, ayiyi kuba yude kude kube yilapho i-dosage information iphuma.
Kukho iinzuzo ezinokwenzeka ukuba i-LGD-2226 powder ingabonelela kubasebenzisi bayo.
Isenzo se-anabolic se-LGD-2226 powder siye sabonakala sisebenza kakuhle. Oku kunika abasebenzisi ithuba lokusebenzisa i-SARM ekulahlekelweni kwamafutha ngokukhawuleza ngaphandle kokujongana neempendulo okanye iimpembelelo ezibangelwa yi-anabolic steroids.
Inokukunceda ekuphuculeni ukuxinwa kwethambo kubantu abakhulayo. Abo baneempawu zethambo, banokuzuza ngokulula Imijikelezo ye-LGD-2226 powder.
I-LGD-2226 powder nayo ingaba namandla amakhulu. Igxina lomzimba luyingxenye ebalulekileyo yenkqubo yokuqhuba umsebenzi kwaye i-LGD-2226 powder iya kukunika loo nto. I-SARM ayiyi kubangela ukuguqulwa kwe-estrogen kwaye ayiyi kuchaphazela umveliso we-testosterone.
I-LGD-2226 powder iye yabonakala ibe nemiphumo emihle ekuphuculeni i-libido phakathi kwabasebenzisi besilisa. Umngcipheko wobugqwetha awukho na, okwenza kube yinto enhle kubafazi.
Inokukunceda ekuphuculeni ukuxinwa kwethambo kubantu abakhulayo. Abo baneempawu zethambo, banokuzuza ngokulula kwi-LGD-2226 powder imijikelezo.
I-LGD-2226 powder nayo ingaba namandla amakhulu. Igxina lomzimba luyingxenye ebalulekileyo yenkqubo yokuqhuba umsebenzi kwaye i-LGD-2226 powder iya kukunika loo nto. I-SARM ayiyi kubangela ukuguqulwa kwe-estrogen kwaye ayiyi kuchaphazela umveliso we testosterone.
I-LGD-2226 powder yahlanganiswa kwi-Ligand Pharmaceuticals, Inc., kunye ne-fluoxymesterone (i-9α-fluoro-11α-hydroxy-17α-methyltestosterone) yathengwa kwi-Spectrum (i-New Brunswick, NJ; i-catalog no-FL-134). Zombili i-LGD-2226 powder kunye ne-fluoxymesterone zenziwe njenge-suspension kwisithuthi esine-9.95% i-polyethylene glycol i-400, i-0.05% i-Tween 80 kunye ne-0.9% carboxymethyl cellulose emanzini. Iziphumo zokuhlolwa kweemveliso zihambelana namanani e-1, 3, 10, 30, kunye ne-100 mg / kg nge-4-ml. I-calcein kunye ne-tetracycline hydrochloride (Sigma) zisetyenziselwa ukubhalwa kwethambo. I-Calcein yachithwa kwi-2% NaHCO3 kunye ne-tetracycline hydrochloride ngamanzi angenayo. Bobabini abamakishi, abaye basetyenziswa kwi-concentration ye-50 mg / ml, bafakwe kwi-0.1 ml, ehambelana nomthamo we-5 mg / 250 g rat kwisithili se-perivascular kwisiseko somsila.
Ukusebenzisa inkqubo yokuhlola impahla (imodeli ye-5501R; i-Instron Corp, iCanton, i-MA), ezine iintlobo zokuvavanywa kwamatshini zenziwa kwi-femur kunye nomzimba we-vertbral lumbar. Umthwalo kunye nesandiso sokwandiswa kwaqokelela nge-software ehambelanayo (iMerlin II; i-Instron Corp). Zonke iimvavanyo zenziwa nge-cell phone ye-5-kN kwizinga lokulayisha rhoqo le-6 mm / min.
I-androgen receptor (AR) i-receptor ye-ligand-inducible steroid receptor edibanisa isenzo se-androgen, ukucacisa i-phenotypes yesini kunye nokukhuthaza i-spermatogenesis. Njengoko i-androgens idlala indima ebalulekileyo ekuphuculweni ngokwesini kunye nomsebenzi, ama-steroidal androgen agonists asetyenziswe kwikliniki iminyaka ethile. Nangona kunjalo, kukho umngcipheko weempembelelo ezinobungozi kwaye amaninzi ama-steroidal androgens akakwazi ukuchazwa ngomlomo, okwenza ukusetyenziswa kwezi zinto. I-1,2-Dihydro-6-N, N-bis (2,2,2-trifluoroethyl) i-amino-4-trifluoromethyl-2-quinolinone (i-LGD-2226 powder) i-ligand nonsteroidal ligand kunye ne-modulator yokukhetha i-AR. Isakhiwo se-crystal esincomekayo se-LGD-2226 powder kunye ne-androgen receptor domain-binding domain (AR LBD) kwi-2.1 Å isisombulule kwaye ifaniswe nesakhiwo se-AR LBD-R1881. Kuthemba ukuba oku kuya kunceda ekuchazeni ngakumbi ukukhethwa kwe-LGD-2226 powder egcinwe kwi-vitro nakwiimvavanyo ze-vivo kunye nasekuphuhliseni amaninzi asebenzayo kwaye asebenzayo.
Okwangoku, iinjongo ezininzi ziqhutywayo, kwaye ingqwalasela ye-LGD-2226 powder ikhula ngokuthe ngcembe.Uya kwenza ntoni njengophodo olutsha lwe-sarm? Indlela yokulawula ukukhula kwemiphumo emibi? Oku kuya kuba ngumxholo wokukhathazeka bonke.
I-LGD-2226 powder isigaba sophando lwezonyango kwaye asizange isetyenziswe ngokubanzi.Kodwa ezinye iipowdder ze-sarm eziyisithupha, zikhona ii-SARMS ezithandathu eziseziklasini zangaphambili. Akukwaziwa ukuba ixesha elide ngaphambi kokuba uphando luphelele okanye ukuba luyekile. Ezi zi-6 ze-SARMS azifumaneki nakwiyiphi na imarike kwaye kukho ulwazi olunqongophe olunokufumaneka kwimiphumo yabo emihle kwaye engalunganga. I-SARMS ezi-6 eziphambi kwekliniki ziquka:
Igama leProdcut CAS.Ayikho Inkcazo yesikhokelo esincinci
I-LGD-2226 powder 328947-93-9 ★★★★★
I-SARMS ezithandathu ze-klinikhi zangaphambili, oko kwaziwa malunga nabo kuboleke amathuba amakhulu. Njengazo zonke i-SARMS ii-SARMS ezi-6 eziphambi kweklinikhi zenzelwe ukufakela kwiimvumi ze-androgen ngaphandle kokukhuthaza imisebenzi ebalulekileyo ebhekwe njengento engalunganga kwizitho zesini zesibini. Ziyasebenza ngokutshintshela i-expression geni ngokubambisana kwi-androgen receptors. Oko kuthetha ukuthini indawo ekujoliswe kuyo kule SARMS ngokuyinhloko ye-muscle kunye neethambo kunye ne-muscle kunye neethambo kuphela, okona akunjalo ne-anabolic androgenic steroids.
I-SARMS ezithandathu ze-pre-clinic zibonise isithembiso kwiindawo ezininzi zonyango, ezinokunceda nakwi-athlete yokuphucula ukusebenza. Oku kuya kukwenyani ngokunyanisekileyo ukuba iziphumo zempembelelo zilinganiselwe njengoko zikhoyo kunye neeSARMS ezikhoyo kwimarike. Izibonelelo ezintle ezijoliswe kuyo kunye nezinye ezingenakulindeleka kodwa zinobuhle ziquka:
· Anabolism - ukukhuthazwa kunye nokukhula kwezicubu ezinamafutha kunye nobukhulu. Oku kubaluleke kakhulu ekubandezelekeni kwesifo somzimba. Kuyimisipha yokudangala ukuba ngamanye amaxesha kunokukhokelela ekupheliseni kwesigulane nangaphambi kokuba eso sifo ngokwaso.
· Ukunyuka kwamandla - kwakhona, okugqwesileyo kulabo abaphethwe yimisipha yokuchitha izifo.
· Ukwanda kweethambo kunye namandla - kunceda kakhulu isigulane se-osteoporosis. I-SARMS ingabonakala ukuba enye yezona zonyango ezisebenzayo zonyango, nangona iinkcukacha ezisemthethweni zisengenangqiqo.
· Ukulahleka kwamafutha - amayeza ane-strong androgen ebopheleleyo ekubophelelaneni kuboniswe ukukhuthaza ipololysis. Iimpawu ezixabisekileyo kwezi SARMS ezi-6 zibhekiselele kulo mbandela azihambelani.
· I-Low ukuya ku-NoVirilization-oku kubaluleke kakhulu kwabasetyhini. Amaninzi amaninzi (anabolic androgenic steroids) ngelixa iintlobo ezifanayo zeanabolic steroids zingafaka isicelo kubafazi njengokuba besenza amadoda, kudla ngokubakho ukukhutshwa kwempilo. Ukuguqulwa kwamanzi kubhekisela ekukhuthazweni kwamadoda njengempawu kubasetyhini, okt ukukhula kweenwele zomzimba, ukunyaniseka kweengoma zezwi kunye nokwandiswa kwamagumbi. Iimvavanyo zeSARMS ziye zaboniswa ukuba zingadluliseli iimpawu zokuhlengahlengiswa kwabasetyhini. Idatha ekhoyo isekela ukuba ii-SARMS zangaphambi kweklinikhi akufanele zihluke, nangona kwakhona kwakhona kweli nqanaba alisigxina ngokupheleleyo.
· Ukwandiswa kweLibido (abafazi) - idatha yokuqala, ngokukodwa malunga ne-AC-262,356 ibonise ukuba i-SARM inokwandisa kakhulu i-femido libido.
· Ukukhulelwa (abesilisa) - idatha yokuqala, ngokukodwa ngokubhekisele kwi-S-23 ibonise i-SARM ingaba yindlela yokukhulelwa yindoda ephumelelayo.
· Ukunyamezela nokuzimelela - Zonke ii-SARMS zangaphambi kweklinikhi kufuneka zibe nefuthe elihle kwixinzelelo lemizimba kunye nesimo somzimba jikelele. Umgangatho wokusebenza ngolo hlobo luxhomekeke kwiSARM kumbuzo kwaye idatha ayengenakulinganiswa ukulinganisa iziphumo ezipheleleyo.
Ukusebenza kakuhle komzimba - Zonke ii-SARMS zangaphambi kwekliniki kufuneka zibe nefuthe elifanelekileyo ekusebenzeni kakuhle komgangatho kwizinga elinye okanye enye. Oku kubhekisela kumandla omzimba ukuba asebenzise kangcono izondlo ezisetyenziswayo.
· I-Estrogen kunye ne-DHT - I-SARMS zangaphambi kweklinikhi ayifanele ikhuphe i-aromatize, ngokubhekiselele ekukhuthazeni i-testosterone kwi-estrogen conversion. Nangona kunjalo, ukwanda kwamanqanaba e-serum estrogen kunokwenzeka ngokuxhomekeke kwi-SARM. Iziphumo ezichaphazelekayo ze-Dihydrotestosterone (DHT) (ukulahleka kweenwele, i-acne) nazo akunakwenzeka ngala maSARMS. Kufuneka kubekho nantoni engathintekiyo kwi-prostate; Enyanisweni, idatha ibonisa ukuba uphuculo lwezempilo lweprothete lungcono.
Akunzima ukubona indlela enokuba luncedo ngayo le SARMS yangaphambi kweklinikhi ingaba yindlela yokunyanga okanye yezokwelapha. Kwakhona kulula ukubona indlela enokuba luncedo ngayo kumdlali, nangona kunjalo xa ucinga ukuba kungenzeka ukuba kungabikho miphumo embi yecala. Nangona kunjalo, ngenxa yesigaba sophando, i-side effect effect engacaciswanga ngokupheleleyo. Unokufumana ulwazi olusuka kumava okusebenzisa ngokuthe ngqo kwiibhodi ze-intanethi, kodwa uninzi lwalo luya kuba nembono encinci yedatha yokuyibuyisela.
Ukuba uzama ukuthenga nayiphi na i-SARMS yangaphambi kweklinikhi uya kufumana ukuba akuyona yonke into elula. Iinkampani ezininzi zophando zenkampani zithengisa i-SARMS kodwa i-S4, i-LGD-4033 kunye MK 2866 iya kuba yinto efumaneka rhoqo. Awuyi kufumana imarike eninzi yeenguqu zangaphambi kweklinikhi de ukuba kwaye xa iGlaxoSmithKline (GSK), i-GTx kunye neLigand Pharmaceuticals zizalisa ezinye izifundo; abathathu abamele abaphandi abaziintloko kunye nabaphuhlisi be-SARMS kunye namayeza anxulumene ne-GTx mhlawumbi ephakamileyo. Abathengi kufuneka baqaphele ukuba bafumana ukuthengwa kwe-SARM zangaphambi kwekliniki ekuthengeni kwi-Intanethi. Nangona ukuthenga okunjalo kunokwenzeka, akuqhelekanga kwaye ngokuqhelekileyo kuya kuba yinkohliso.
11.Buy i-LGD-2226 powder kwi-intanethi
I-LGD-2226 powder okwangoku ayiqalwanga ngokusemthethweni njengeziyobisi. Abaphuhlisi basesilungisa kakuhle izinto ezimbalwa. Uvavanyo lwezonyango luyaqhubeka kodwa luya kuba lixesha ngaphambi kokuba lenziwe kwaye luthulile. Ungathenga kuphela le SARM kumthengisi abancinane kwi-intanethi-AASraw.
Nantsi isincomo esinokwethenjelwa kakhulu-I-AASraw, eyona nto enkulu ekuboneleleni ngomgangatho ophezulu we-sarm powder.Ukunikezela ngeenkonzo eziphezulu ze-LGD-2226 powder kunye nokuhlanzeka akukho ngaphantsi kwe98% .Izinto ezintle ezivela kwi-AASraw I-LGD-2226 powder yokuthengisa njengalandelayo:
Siqinisekisa ukuhlambuluka okukhulu kunabo bonke i-powders> 98%, kwaye ngenxa yokuba singumvelisi ongeyithengisi, zonke iimpahla apha zithengiswa ngqo ngexabiso eliphantsi.
I-3) Izinga eliphezulu eliphezulu lokunikezelwa ngokukhuselekileyo lingaphezulu kwe-98%.
3. I-AASraw inabathengi kuwo wonke umhlaba
I-2) Impendulo yomsebenzisi iya kuyanconywa, amacebiso akho aya kusenza ukuba siphucule inkonzo yethu, kwaye sinembopheleleko yethu ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabaxhasi.
I-3) I-AASraw ingomnye umthengisi onokwethenjelwa wezinto eziphathekayo ze-steroid ezineempahla eziphambili, ukuthunyelwa ngokukhuselekileyo nokukhawuleza kunye nenkonzo enhle.
I-LGD-2226 powder iyimoduli ye-androgen ye-receptor esetyenziswayo ekunyangeni ukuxhatshazwa kwemisipha kunye ne-osteoporosis, ibonisa ukuba inomphumela we-anabolic kwi-muscle kunye namathambo esifuba.
Iingxaki zokusebenzisa i-LGD-2226 powder
Akukho ziphumo ezize zaziwa ngokusebenzisa i-LGD-2226 powder. Kubalulekile ukuphindaphinda ukuba i-SARM iqhutywe ngoku kwaye izilingo zeklinikhi ziyaqhubeka. Nangona kunjalo, akukho sizathu sokukholelwa ukuba kukho nayiphi na imiphumo yokukhathaza abasebenzisi ngethuba.
Ngaba Abasetyhini bangasebenzisa i-LGD-2226 powder?
Nangona i-LGD-2226 powder isasesikweni sayo sesilingo, kude kube manje akubanga i-virilization. Ngokumalunga nabasetyhini abafuna ukusebenzisa i-SARM ekulahlekelweni kwe-fat fat or muscle mass, kukhuselekile kubo.
Ziziphi iiMithetho yangoku?
I-LGD-2226 powder isisigxina sokuphanda kwisigaba 1 sezilingo zeklinikhi. Ngoxa kungengabonakali njengento engekho mthethweni kumazwe amaninzi, ukuhanjiswa kwayo ngexesha elikhawulezileyo kuncinci. Ngenxa yobungakanani bayo be-androgenic kwaye indima ye-LGD-2226 inokudlala ekunyuseni amandla, i-World Anti-Doping Agency iye yahlula njengento engavumelekanga.
Naluphina ulwazi olubanzi malunga ne-LGD-2226 powder?
I-LGD-2226 powder ibini i-anabolic kakhulu kwiithambo zombini kunye ne-muscle muscle, eneempembelelo ezincinci kunye ne-androgenic. Kwakhona kunenzuzo yokuba yi-libido booster (kungekhona yonke i-SARM enayo le propati, kwaye ezinye zineempembelelo ezingafaniyo). Njengoko i-SARM ejikeleze yonke indawo, lo ubonisa ubuncinane. Kodwa okwangoku, nangona itholakala kubathengi baseChina abaphandle, ndibonayo encinci kwi-feedback yomsebenzisi ethembekileyo kuyo.
Yintoni elincinci elithengiswayo? O mncinane?
I-oda ye-AASraw min min ye-10g, Ungathumela umrhumo we-oda ngewebhu yethu: www.aasraw.com.
Thenga i-YK11 Powder- Iingcamango & Izibonelelo kunye nemiphumo emibi
Izinzuzo zokusebenzisa iMK-677 / i-Ibutamoren powder ukwenzela ukwakha umzimba
Thenga i-RAD140 (Testolone) ipowder: Iyintoni i-RAD140 esetyenziswayo?
I-powder ye-Sarm: Kukuphi ukuthenga i-GW-501516 powder?
I-LGD-2226 powder Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo? I-SARM esetyenziswa ngokuqhelekileyo: Kukuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwixabiso elinamandla?
tags: bathenge i-LGD-2226 powder, I-LGD-2226 powder, I-LGD-2226 powder yokuthengisa, Abaxhasi be-LGD-2226
I-CDP i-Choline Powder: Iingcebiso kunye neZibonelelo kunye neempembelelo ezisecaleni-Iimpawu zeNootropics ezichanekileyo	I-Nootropics Enhle ye-Aniracetam Powder yokuphuculwa kwengqondo